Shiinaha Submersible Axial, Soosaarayaasha Mashiinka Isku Qasan iyo alaableyda | KAIQUAN
Mashiinka La Qasayo ee Isku Qasan
Qulqulka: 460-90000m3 / saacaddii
Madaxa: Ilaa 22m
Waxay qaadi kartaa biyo nadiif ah iyo bulaacada fudud: iyo walxaha gudbiya ugu badnaan kama badna 100mm
ZQHQ Taxanaha Submersible Axial, Bambooyin Qasan isku Qasan
Axial Submersible, Isku dhafan Fhooseeya Faa'iidooyinka Bamgaarka:
1. La qabsiga sare
(1) Waad qaadi kartaa biyo nadiif ah iyo biyo si fudud loo nijaaseeyay, oo leh heer kulka warbaahinta illaa 40 ℃ iyo qiimaha PH ee 4-10; Dhexroorka ugu sarreeya ee walxaha la dhaafi karo waa 100mm.
(2) Codsiyada: Biyo gelinta magaalooyinka, mashaariicda leexashada, nidaamyada bullaacadaha iyo bullaacadaha, shaqooyinka daaweynta bullaacadaha, nidaamyada bullaacadaha saldhigga tamarta, biyo bixinta iyo bullaacadaha loogu talagalay docks, marin biyoodka shabakadda biyaha, waraabinta iyo bullaacadaha, aquaculture iyo wixii la mid ah. Mashiinka qulqulka qulqulka ee qulqulka leh oo leh waxqabad sare iyo waxqabadka wanaagsan ee ka hortagga, waxay ku habboon yihiin munaasabado kala duwanaansho heer sare oo biyo ah iyo madax sare, oo guud ahaan ka hooseeya 20m.
2. Maalgelin yar oo ku timaadda saldhigga bamka, iyo hawlgal fudud iyo maarayn
(1) Mishiinku wuxuu ku shaqeeyaa biyaha hoostiisa, wuxuu u baahan yahay shaqo aad u yar oo dhulka ah iyo injineernimada qaab dhismeedka dhismooyinka saldhigyada bamka iyo sidoo kale aagga rakibida oo yar. Natiija ahaan, kharashka dhismaha waxaa lagu dhimi karaa 30-40%
(2) Isku-darka matoorka iyo mashiinka mashiinka ayaa badbaadiya waqtiga iyo hawl-qabashada goobta isku-imaatinka goobta ee 'mashiinka gudbinta - dhidibka dhumucda mashiinka', taas oo keeneysa rakibidda goobta oo sahlan oo dhakhso leh
(3) Maareyn fudud, iyo qiime jaban oo maamul iyo socodsiin ah.
(4) Way fududahay in lagu shaqeeyo kontoroolka fog iyo kan otomaatiga ah.
(5) Sawaxan hoose, oo aan lahayn aag heerkulkiisu sarreeyo oo ku yaal saldhigyada bamka; in si fiican loo hubiyo jawiga hawlgalka; saldhigyada matoorka ee dhulka hoostiisa ku yaal ayaa loo dhisi karaa si waafaqsan shuruudaha, si loo ilaaliyo qaabka deegaanka iyo muuqaalka dhulka.
(6) Waa doorashada ugu fiican ee lagu xallin karo dhibaatooyinka ka hortagga daadka ee matoorrada lagu rakibay saldhigyada matoorka ee ku teedsan wabiyada iyo harooyinka leh is-bedbeddelka heerarka biyaha. Intaas waxaa sii dheer, iyadoo la keydinaayo dhidibka dheer iyo marinka dhexe ee udhaxeeya mootada iyo mashiinka, cutubku wuxuu u socon karaa si xasiloon oo lagu kalsoonaan karo.
3. Kalsooni sarreysa, gariir la'aan, iyo buuq hooseeya
(1) Iyada oo la adeegsanayo qaab hawo-sare oo heer sare ah, hubi shuruudaha waxqabadka adeegsadayaasha. Isweydaarsiga moodooyinka dhaqameed ee loogu talagalay dadka isticmaala inay doortaan. Waxaa jira taxane ah bambooyinkan, kuwaas oo leh kala duwanaansho wax-ku-ool ah oo aad u sarreeya, oo lagu dabaqi karo xaaladaha kala duwan ee shaqada, waxtarka tamarta sare, iyo kharashyada hawlgalka oo hooseeya.
(2) Khatarta mashiinka laba-laab ama saddex-geesood ah waxay ka hortageysaa daadashada. Si waadixan u saliideeya waji gaar ah oo leh qaab dhismeed macquul ah iyo nolol adeeg dheer ayaa la qaatay.
(3) Iyada oo leh dahaadhka Fasalka F, oo la imow ilaalinta heerkulka, kormeerka, dareeraha dareeraha dareeraha iyo qaybaha kale ee digniinta.
(4) Iyada oo leh xaalado qaboojin oo wanaagsan sida biyaha loo dhex geli karo, oo ku shaqeeya xasillooni leh gariir yar, iyo buuq yar.
Hore: Qodista Bamka Bullaacadaha Oo La Quusin Karo
Xiga: Bamka wasakhda ee la quusin karo (0.75-7.5Kw)
Jaantuska Submersible Axial, Isku Qasan Sawirka Qaab Dhismeedka
Jaantuska Submersible Axial, Isku Qasan Mashiinka Mashiinka Sawirka iyo Sharaxaada
fur bamka si fiican u quusin kara
matoorka la quusin karo
bamka balliga lagu quusin karo
qiimaha bamka la quusin karo
Bamka wasakhda Biyaha
bamka sump ee la quusin karo
Mashiinka Biyaha Lagu Dhejin Karo
bamka ceelka la quusin karo
bamka cadaadiska biyaha